တစ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်တံဆိပ်များရေးသားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဒါဟာ Quote ရေးသားဖို့ သာ. မြတ်၏ tablichkaquot; ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကိုရှင်းပါတယ်။ တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားစာပိုဒ်တိုများပြည်ပမှာအဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းကြကုန်အံ့။ ))))
မှန်ကန်စွာစကားလုံး Quote စာလုံးပေါင်း; ခွင့်ပြုခဲ့ beydzhquot;, Quote; bedzhquot; ။
တစ်ခက်ဗညျြးသရအက္ခရာရေးအီးပြီးနောက်သရအက္ခရာ, E နှင့်အီးဒရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းရေးသားခြင်း၏မကြာသေးမီလုပ်ရပ်များအပါအဝင်ရုရှားဘာသာစကားတွင်တစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်ရရှိထားသည်ဟုနိုင်ငံခြားစကားလုံးများသည်ဤကိစ္စတွင်ပျော့ပျောင်းသရသံအီးပြီးနောက်, B, အဆိုအရအစိုင်အခဲဖြစ်ပြီးဒါမှန်သည် အီးနောက်မှရေးပါ
သို့သျောလညျးရအက္ခရာ, E / E ကိုရေးသားခြင်း၏ဤနည်းဥပဒေအလွန်ကခြွင်းချက်အဖြစ်တင်းကျပ်နှင့်မဟုတ်ဘဲ recommendatory သဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ Baer သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ပေမယ့်ကလေးသို့မဟုတ်ရပ်ဘီရေးပါ။ သို့အတွက်ကြောင့်စကားလုံးတံဆိပ်ရေးသားဖို့မှန်ကန်သောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တခါပိုပြီးဘာသာစကားကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဖွယ်ရှိရုရှားစကားလုံးတံဆိပ်နှင့်ဖမ်းယူ။
ရုရှားဘာသာစကားမကြာသေးမီကငါချေးမခေါ်မယ်ဆိုပြီးစကားများနှင့်ရုရှားအက္ခရာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်ငံခြားစကားလုံးများ၏အမျိုးအစားထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ badgequot;; သူတို့ကိုတို့တွင်စကားလုံး Quote ဖြစ်ပြီး, အရာရုရှားအက္ခရာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, ထိုအဘိဓာန်ထဲမှာပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးပေါင်းငံပြာရည်အောက်မှာပါဝင်သည်။ Prichm ပင်ထငျရှား quote; rekomendovanoquot; ။ အဘိဓာန်၏သင့်လျော်သောလက္ခဏာများရှိခြင်းစဉ်ဒါကနိုင်ငံခြားစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဘိဓာန် Kuznetsova (2014 နှစ်ပေါင်းထံမှ) စာဖြင့်ရေးသား quote;တံဆိပ်Quote; ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဘာသာစကားကိုရေးသား၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသုံးအများဆုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Lopatin နှင့် quote; bedzhquot; ဖြည့်ဆည်း။ ခုနှစ်တွင်အခြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကို Quote ခွင့်ပြုခဲ့; beydzhquot; သို့သော်ဤငါ prizhivtsya, မထင်မမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်၌ဤစကားလုံးနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို -E- အသံထွက်နေသည်ပိတ်ထားရသောအက္ခရာ -A-, မှတဆင့်သည်တံဆိပ်ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, trans ဆိုတဲ့ literatsii ၏စည်းမျဉ်းများအရသိရသည်ကတံဆိပ်အဖြစ်စာဖြင့်ရေးသားရပါမည်။
Option ကိုနေ့စဉ်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်သောတံဆိပ်များ, ဒါပေမယ့်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ -A- တစ်ပွင့်လင်း syllable အတွက်ဖြစ်လိုလျှင်အပြည့်အဝသညျသစ်စာရှိခဲ့နှင့် Transliteration နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်၏စည်းမျဉ်းများအဝိဇ္ဇာ၏၎င်း၏ဘုံနှင့်မှန်ကန်သောတစ်ခုသာအကျိုးဆက်ကြလိမ့်မယ်။
Более правильным вариантом, будет написание quot;бейджquot;, можно просто уменьшительно quot;бейджикquot;. Но произносят между тем, чаще всего с буквой quot;эquot;, но писать так — неправильно.
တချို့ကသတင်းရင်းမြစ်ကရေးသား Quote ဖြစ်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ; bedzhquot; ထိုကဲ့သို့သောအရေးအသားလည်းမှန်ကန်သောစဉ်းစားလိမ့်မည်။
Слово это, заимствованное, и по-английски будет так — quot;Badgequot;. (Что можно перевести, как метка или бирка).
ရုရှားမှာစကားလုံး quote; beydzhquot; အင်္ဂလိပ်ချေး Quote အဖြစ်ကျမ်းစာလာသည်ကား, badgequot; ။ ထိုအခါသရသံ Quote မှတဆင့်စကားလုံးအသံထွက်; Equot; ။ ဒါဟာ Quote လှည့်; bedzhquot; ။ သို့သော်ရွတ်ဆိုခြင်းနှင့် quote; beydzhquot; နှင့် quote; beydzhikquot;, လမ်းပုံသဏ္ဍာန် ပတျသကျ. အလှနျသေးနုပေးခြင်း။
မှန်ကန်စွာချေးစကားလုံးတစ်ဦးအဖြစ်ရုရှား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ် Quote; Beydzhquot;, Quote; bedzhquot;, то есть через гласную букву quot;еquot;. По крайней мере в этом уверяет такая известная энциклопедия как Википедия. Ну а разные российские орфографические словари трактуют это слово по разному. Видимо, слово до сих пор quot;плаваетquot;. А еще остается открытым вопрос — стоит ли вставлять в слово букву quot;йquot;. Мы в школе это слово не проходили.
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,262 စက္ကန့်ကျော် Generate ။